Wiil Soomaali ah oo noqday shaqsigii ugu horeeyay oo Ubaxa saaray goobtii lagu dilay askariga Ingiriiska ahaa!!(Daawo Muuqaal +Warbixin) | Salaan Media
Wiil Soomaali ah laguna magacaabo Ahmed Jaamac da´diisana lagu sheegay 26 jir ayaa waxa uu noqday shaqsigii ugu horeeyay ee dhigay ama Ubaxa saaray goobtii lagu dilay askariga u dhashay dalka Ingiriiska ee Maalintii Arbacada aheyd Lagu dilay Xaafadda Woolwich ee Koonfur Bari ee Magaalada London.
Sidoo kale Qaar Kamid ah Shacabka Ingiriiska oo awalba qarsan jiray naceeybka ay u qabaan Islaamka ayaa waxa ay ku mar-marsiyoodeen dilkii magaalada London loogu geeystay mid ka mid ah ciidamada Milatariga dalka Ingiriiska oo labo nin ay ku dileen Xaafadda Woolwich ee Magaalada London .
Dadkaan oo qaarkood wajiga soo qarsaday waxa ay weerareen Masaajid kuwaas oo ku dhawaaqayay hadalo lidi ku ah dadka Islaamka ah ee ku nool gudaha dalka Ingiriiska iyo dawlada Ingiriiska . Ciidamada Booliiska dalka Ingiriiska ayaa xabsiga u taxaabay qaar ka mid ah ragii weeraray Masjidka.
R/Wasaaraha dalka Ingiriiska Mr.David Cameron oo warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay in weerarka dhacay aanan lagu qaadin kaliyah dalka Ingiriiska balse raga geeystay ay ahaayeen kuwo magaca ka xumeenaya Muslimiinta ku nool dalka Ingiriiska.
Wiilasha Midida ku qaarajiyay Askariga Ingiriiska ah ayaa ku dhashay gudaha dalka Ingiriiska balse waxa ay asal ahaan ka soo jeedaan dalka Nayjeeriya . Ciidamada Sirdoonka dalka Ingiriiska ayaa shaaciyay in raga dilka geeystay ay yihiin kuwo mudo dheer la ogaa inay faraha kula jiraan falal Argagixiso balse la yareesan jiray hab dhaqankooda.
Wiilashaan oo la dhaawacay waxaa la dhigay Isbitaal ku yaala gudaha dalka Ingiriiska waxaana iminka socda baaritaan dheer maadaama looga shakisan yahay inay xiriir hoose la lahaayeen ururka BOKA HARAM oo ka dagaalama gudaha dalka Nayjeeriya kaas oo moowqif ahaan taageersan ururka Al Qaacida.
Duqa magaalada London Mr.Boris Johnson oo Saxaafada la hadlayay ayaa carabka ku dhuftay inay heestaan Booliiska dunida ugu wanaagsan waliba sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo ogaan doonaan sababta ka dambeeysa falkii lagu qaarajiyay Askariga Ingiriiska ah
Daawo Muuqaal ahaan Wiilka Soomaaliga ee Ubaxa Dhigay Goobta uu dilka ka dhacay